Alakamisy 1 Aprily 2021
Ny Pavily Ny ResoNet Pavilion dia nomen'ny Sinan Mansions any Shanghai ho fankalazana ny taom-baovao sinoa 2017. Izy io dia misy tranom-bala vonjimaika miampy "resonet LED" mifono hazandrano mifatotra ao anaty atiny. Mampiasa teknika Low-Fi izy ireo mba hijery sary an-tsaina ny habetsaky ny habetsaky ny haben'ny voajanahary, amin'ny alàlan'ny fifandraisan'ny olona sy ny manodidina azy hitan'ny harato LED. Ny Pavilion dia manazava ny sehatry ny fanjakana ho setrin'ny fanentanana. Ankoatra ny mpitsidika dia afaka manao ny sitrapon'i festival Festival, azo ampiasaina ho toy ny sehatra fampisehoana ihany koa izy io.
Alarobia 31 Martsa 2021
Serivisy Ny foto-kevitry ny tetikasa dia ny "mampifandray ny birao amin'ny tanàna" manararaotra ny tontolo. Ilay toerana dia eo amin'ilay toerana misy ny fomba fijerin'ny tanàna. Mba hahatratrarana azy dia apetraka ny toerana vita amin'ny tonelina, izay mamakivaky ny vavahady fidirana mankamin'ny faran'ny birao. Ny tsipika amin'ny hazo vita amin'ny valindrihana sy ny hantsana mainty izay napetraka jiro sy fametrahana fiaramanidina fiaramanidina dia manasongadina ny lalana mankany an-tanàna.
Talata 30 Martsa 2021
Seza Ny seza fehikibo Lollipop dia fitambaran'ireo endrika tsy mahazatra sy loko mena. Ny silhouette sy ny lokon'ny loko dia tsy maintsy mijery lavitra toy ny vatomamy, saingy amin'ny fotoana iray dia tokony hiditra ao anaty tranobe samy hafa ny karazan-jiro. Ny endrika chupa-chups dia namorona ny fototry ny fiarovan-tànana ary ny lamosina sy ny seza dia natao amin'ny endrika karazana vatomamy. Ny seza fehikibo Lollipop dia noforonina ho an'ny olona izay mandray fanapahan-kevitra tsy sahy sy lamaody, fa tsy te hanafoana ny fiasa sy fampiononana.
Ny Takelaka Akoustika Voakaly Ambony
Alatsinainy 29 Martsa 2021
Ny Takelaka Akoustika Voakaly Ambony Ny fohalanay dia ny famatsiana sy fametrahana takelaka akustika marobe vita amin'ny lamba izay misy habe, zoro ary endrika samihafa. Ny prototipe voalohany dia nahita fiovana teo amin'ny famolavolana sy ny fomba ara-batana amin'ny fametrahana sy ny fampiatoana ireo takelaka avy amin'ny rindrina, valin-drihana ary ny etona amin'ny tohatra. Tamin'izay indrindra no takatsika fa ny rafitra mihantona ara-dalàna ho an'ny takelaka valizy dia tsy ampy amin'ny filanay ary namolavola ny sainay.
Alahady 28 Martsa 2021
Asabotsy 27 Martsa 2021
Trano Fisakafoanana Betsaka ny an'ireto maoderina mifangaro ankehitriny amin'ny tsena eto Shina ankehitriny, matetika miorina amin'ny modely nentim-paharazana saingy miaraka amin'ireo fitaovana maoderina na fampisehoana vaovao. Yuyuyu dia trano fisakafoanana shinoa, namorona fomba vaovao hanehoana ny endrika orienta Atsinanana ny Yokuyu, Fametrahana vaovao izay misy andalana sy teboka, ireo avy amina varavarana mankany anaty anatiny eo amin'trano fisakafoanana. Miaraka amin'ny fanovana ny fotoana, miova ihany koa ny fankasitrahana ny aestetika ny olona. Ho an'ny endrika orientalis orientaly ankehitriny, tena ilaina tokoa ny fanavaozana.
Ny Pavily Serivisy Seza Ny Takelaka Akoustika Voakaly Ambony Ny Vy Vita Amin'ny Curling Trano Fisakafoanana